Vaovao - Fetiben'ny andriamanibavy Yantai Xinyang Electronics 2019 ary fihaonambe famintinana sy fiderana
Fetiben'ny andriamanibavy Yantai Xinyang Electronics 2019 ary fihaonambe famintinana sy fiderana
Ny 8 martsa 2019, andriamanibavy,
tamin'ny andro faharoa tamin'ny volana faharoa, nanandratra ny lohany ilay dragona,
Amin'ity Andro Dragon sy Phoenix efa zato taona ity, ny mpiasa rehetra ao amin'ny Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. dia nanatrika ny fankalazana azy manokana: Fetiben'ny andriamanibavy Xinyang Electronics '2019 ary fihaonambe famintinana sy fiderana isan-taona!
Nandritra ny fotoana fankalazana ireo festival roa sy ny hafanan'ny lohataona, Yantai Longjingchun Hotel dia nanangana ny tsio-drivotra tamin'ny lohataona, feno avonavona, mpiasa Xinyang sy vahiny eran'izao tontolo izao. Eny an-tsehatra, ny efijery LED lehibe dia miroborobo ary mampiseho fatratra ny lohahevitry ny fihaonambe: Mifanome tànana hikatsaka nofy ary hamorona voninahitra lehibe kokoa!
11:38 Tamin'ny fiafaran'ny famakiana isa dia niondrana an-tsehatra tamin'ny gadona mahafinaritra an'i "Xinyang Welcome You" ny mpampiantrano, ary nanomboka ny valandresaka!
Andriamatoa Jiang Shiliang nanao lahateny
Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. dia nitazona hatrany ny soatoavin'ny fahamarinana, ny fifantohana, ny fankasitrahana ary ny fanavaozana hatramin'ny nananganana azy, ary mitazona ny fanahin'ny orinasa tsy mivadika, manolo-tena ary mikatsaka ny hatsarana, ary manohy manitatra ny tsena hamoronana lanja ho an'ny mpanjifa!
Raha mijery ny taona 2018 dia nitombo hatrany ny ekipan'i Xinyang ary nanjary lavorary kokoa ny fananganana ny ekipany. Teo ambany fitarihan'ny cadres modely sy ny mpiasa, Xinyang dia nanohy nanohy nandroso ny fanahin'ny asa tanana, nandroso hatrany, ary nitady ny tonga lafatra. Nanokatra tsena vahiny tamin'ny fomba mahomby izy ary nahatratra 100 tapitrisa ny sandan'ny vokatra, ary faly ny mpiasan'izy ireo. Ny nofy dia namorona toerana mitarika eo amin'ny sehatry ny indostria!
Mari-pankasitrahana ho an'ny mpiasa 2018
Mari-pankasitrahana Cadre tsara 2018
Ny loka fahatelo amin'ny loka General Manager Innovation 2018
Ny loka voalohany sy faharoa an'ny loka General Manager Innovation 2018
Andriamatoa Jiang nizara ilay toast
Mankalaza ny faha-70 taonan'ny tanindrazana amin'ny taona 2019, ny mpiasa Xinyang dia hampiasa ny fanahin'ny orinasa manao ny marina, manolo-tena ary tsara hamitana ny tanjon'ny orinasa 180 tapitrisa, manolotra fanomezana ho an'ny tanindrazana lehibe, ary mamorona famirapiratana vaovao! Faly izahay fa miaina amin'ity vanim-potoana mahafinaritra ity, ary mankasitraka ny fananana sehatra Xinyang! Misitrika ranomasina misandratra, avo be ny vorona manidina. Ny nomen'ny Xinyang Electronics mpiasa dia tsy antoka ara-materialy fotsiny fa koa fandikana tonga lafatra ny tontolon'ny fanahy.
Mandeha amin'ny atrikasa vaovao ny atrikasa famaranana
atrikasa fitsaboana hafanana: ny hoe samy mivoy lakana sy mitondra ny sambo lehibe ny rehetra
Fehezan-teny telo sy sasany atolotry ny cadre taloha an'ny Xinyang Electronics - Xinyang Brilliant
Ilay dihy nentin'ny ekipa tanora tao amin'ny atrikasa famolavolana tsindrona — mianatra mitomany
Sampan-draharahan'ny mpiasa misahana ny fitantanan-draharaha Solo - zom-pirenena Youai
Tantaram-pitiavana atrik'aretina sketches-harem tantaram-piainana
Sampan-draharaha mifehy ny kalitaon'ny solo-rameva any an'efitra
Dihy amin'ny atrikasa Component — Dance Indiana
Kôlejin'ny tovovavy atrikasa elektromagnet: 365 tso-drano
Sketsa andriamanibavy sy lehilahy vavy
Mihira sy mandihy-Me ary ny tanindrazako ny sampana fanaraha-maso kalitao
Andriamatoa Jiang Solo Solo — Manomboka
Mandihy atrikasa mandeha ho azy - fanombohana tsara
Warehouse-tongotra mainty sy fotsy
Dihy amin'ny atrikasa fanjaitra - manomboka amin'ny fahasambarana
Dance amin'ny atrikasa elektromagnet - Faly ny rehetra
Tapitra ny fivoriana fanao isan-taona, naka sary vondrona niaraka tamin'i Andriamatoa Jiang ny mpampiantrano
Sary vondrona miaraka amin'ny vahiny
Misaotra ny vahiny sy ny fianakaviana Xinyang rehetra. Ndao hitohy ny hafaliantsika ary hanoratra ny voninahitsika ao Xinyang. Nanomboka ny taona vaovao. Dia vaovao, fitahiana vaovao ary fanantenana vaovao. Feno hambom-po sy andraikitra ao Xinyang izahay. , Ento ny firarianay hiarahaba ny tsara kokoa rahampitso! Ao Xinyang ny fitiavana ary sarotra ny miala. Miandrandra ny fihaonana indray isika amin'ny taona 2020! Bless Xinyang dia mamiratra foana!
Fotoana fandefasana: Mar-08-2019